SIM makadhi, nhare yeInternet uye mafoni epasi rese | Linux Vakapindwa muropa
Nyika yepachena: SIM makadhi, nhare yeInternet uye mafoni epasi rese
Izvi zvinogona kunge zvisingaite senge yakakodzera chinyorwa cheichi blog, asi ikozvino uchaona maInternet 4G, isina waya internet, mafoni epasi rese, SIM makadhi uye mafoni emafoni ane zvakawanda zvekuita neyemahara kana yakavhurika sosi yenyika. Mune ino posvo isu tichaedza kukuzivisa iwe kune rimwe divi reaya matekinoroji, iro rakavhurika uye rakasarudzika divi ravanaro asi izvo iwe zvausingazive pamwe nerezvokutengeserana.
Muchidimbu, misoro yatichazotaura nezvayo yakakosha nhasi, nekuti yese inotitungamira kubatanidzwa munharaunda yedu. Ndokusaka pano tichazotaura nezve dzimwe nzira dzinonakidza dzinozokubatsira kunatsiridza kuvanzika kwako uye kunyangwe kudzidza nemamwe anonakidza akavhurika sosi mapurojekiti ...
1 4G / LTE Indaneti:
2 Wireless Internet (isina waya):
3 Kufona kwepasirese
4 SIM makadhi: njodzi uye dzimwe nzira
5 IoT mapurojekiti: iyo Internet yezvinhu
4G / LTE Indaneti:
Yokutanga ndeye tsanangura kuti chii ichi 4G zvakawanda zvatinonzwa. Icho chinoreva kuchizvarwa chechina chefoni nharembozha matekinoroji anoenderana neIP protocol, anotungamira we5G uye mutsivi we3G. Inotsanangurwa nekomiti yeITU, semamwe matekinoroji erudzi urwu, kufungidzira iyo yakanyanya data kumhanya (100Mbit / s in motion uye 1Gbit / s mukusashanda) uye kudzidza matekinoroji emumiriri aigona kunzi 4G.
Rimwe izwi raungave wakanzwawo nderekuti LTE (Yakareba Nguva Shanduko), semuenzaniso iwe unenge waona mavara se4G LTE. LTE iprotocol pasi peiyo 3GPP boka standard uye izvo dzimwe nguva zvinogona kuvhiringidza, asi isu tichatsanangura mutsauko. Zvichitaurwa zviri nyore, LTE inowedzera kumhanyisa kunetiweki ine "zvigadziriso." Semuenzaniso, netiweki ye4G inogona kuve neyekumhanyisa kumhanyisa ingangoita 80Mbps nepo kana LTE ikawedzerwa kune iyo 4G, ipapo tinogona kukwira kusvika mazana matatu emamiriyoni ekuti utore muchikamu cheLTE.
Kune avo vasingazive GNURadio, kutaura kuti ndechimwe chakavhurika chishandiso chinopa chiratidzo chekugadzirisa mabhuroko ekushandisa software redhiyo masystem. Nekodzero yeRF (Radio Frequency) Hardware, unogona kushandisa anoshanda ekutaurirana sisitimu kana kungoshandisa GNU Radio kuita kutaurirana kwekufananidza. GNU Radio inoshandisa USRP (Universal Software Radio Peripheral) seye komputa transceiver ine A / D, D / A vashanduri, nezvimwe.
Wireless Internet (isina waya):
Kunze kwemadhiraivha eakavhurika sosi network makadhi uye zvisina waya zvishandiso, kune mamwe zvakare anonakidza mapurojekiti OpenWireless.org iwo muenzaniso wesangano rinotarisira kugadzira ramangwana reInternet iro rakavhurika uye kwese kwese. Chinhu chakafanana neicho shasha Elon Musk (mugadziri wePayPal, SpaceX, Tesla Motros, nezvimwewo) anoda kugadzira, uyo anotarisira kuvhura chirongwa chekuda kuisa satellites diki diki mazana mana mukutenderera uye kupa kufukidza chero kupi pasi. Iwe unogona zvakare kufarira kune mamwe mawebhusaiti senge MyYunHun.com, kwaunowana yakawanda info nezve ma routers uye firmware.
Uye isu hatigone kukanganwa mapurojekiti akakura se Vhura-Mesh, iyo inobvumidza iwe kugadzira uye kuendesa isingadhuri nyanzvi yeWiFI network nenzira yakapusa. Nekudaro, semuenzaniso, isu tinogona kuwedzera yedu isina waya yekuvhara nharaunda nekugonesa nzvimbo dzekuwana mukati medzvimbo iripo. Pasina kupokana inonakidza kune epamba nharaunda uye zvakare yebhizinesi, nekuchinjika uye mutengo wekuchengetedza uyo unovhura mapurojekiti anosanganisira.
Kana kukanganwa OpenWrt, Linux distro yemidziyo yemagetsi senge ma routers (zvakare paP2P node, mafaera emafaira, maseva eWebcam, firewall uye magedhi eVPN). Ma routers akafanana nemakomputa madiki akatsaurirwa kubata network traffic, saka vanoda zvinhu zvakaita se microprocessor, ndangariro, I / O, uyezve yakadzamidzirwa inoshanda sisitimu. Pasi pechirevo cheGPL, yakasimudzirwa zvekuti vagadziri vema routers vakaburitsa makodhi avo uye zvishoma nezvishoma zvakura kuita hunyanzvi.
VhuraWISP imwe chikuva chakavhurika chekushandisa yakakwana yeWiFi sevhisi Kuti uite izvi, OpenWISP inozara software suite inosanganisira mashanu makuru maapplication, pamwe nemadriver, anotorwa kubva kune ayo anoshandiswa muItari nedzimwe nyika dzeEuropean kupa veruzhinji maWiFi services. Iwe unogona zvakare kufarira kuziva zvakawanda nezve OpenWISP senge OpenWUMS, OpenWM uye OpenWF, OpenWRT, OpenWGM, OpenWCPM uye OpenWMW.
Izvo hazvidikanwe kutsanangura izvo iyo international calls, asi ndinoda kutsanangura chimwe chinhu nezve VoIP. Vazhinji venyu muchatoziva tekinoroji iyi chaizvo, asi kune avo vasingazvizive, VoIP (Inzwi pamusoro peIP) Iyo seti yezve zviwanikwa zvemazwi anodana pamusoro peInternet pamusoro peiyo IP protocol. Ndokureva kuti, izwi rinofamba nenzira yemadhijitari yedhata pane kuzviita nenzira yeanalogog semafoni akajairwa, uye pachinzvimbo chekuzviita pamusoro penharembozha, zvinodaro paInternet.
VoIP kwave kushanduka uye kushambadzira kuitiswa kwekuyedza network iyo yakashandisa tekinoroji imwechete uye iyo yakagadzirwa neARPANET muna 1973. Asi hatifanire kukanganisa IP telephony (yakapararira zvakanyanya nguva pfupi yadarika) neVoIP. Musiyano wekutanga ndewekuti VoIP haidi manhamba efoni, asi IP runhareKunyangwe ichishandisa tekinoroji yeVoIP, inoshandisawo manhamba E.164.
Zvakanaka, kuita kufona kwenyika uye kwepasi rese neVoIP, iwe uchazoziva kuti kune akawanda akavhurwa sosi mapurojekiti eizvi. Asi ndinoda kuratidza maviri acho: Antartec naLinphone. Kunyangwe paine zvimwe zvakawanda zveLinux. Iwe wakasununguka kushandisa chero chaunoda. Rangarira kuti Microsoft's Skype inowanikwawo, kunyange ini ndichisarudza dzimwe nzira dzemahara senge Tsitsi, Ekiga, KDE Softphones, Etc.
SIM makadhi: njodzi uye dzimwe nzira
ari SIM makadhi ivo vanogona kuve nechinyorwa chakaparadzana kuti vataure kwenguva refu pamusoro pavo. Asi kutaura kuti SIM ndicho chidimbu cheMunyoreri Wokuzivikanwa Module. Kadhi rinowanikwa muSIM, microSIM, nanoSIM uye yakaiswa mukati maSIM mafomati, uye basa rayo ndereku "chengetedza" kiyi yebasa yemubhadhari kuti vazvizive pa network, kunyange ichikwanisawo kuisa PIN kodhi mundangariro dzayo nenhamba dzenhare. kubva kudhairekitori redu sezvaungave uchitoziva.
Pamberi pekuzarurirwa kwazvino naEdward Snowden uye kusimbisa kuchengetedzeka kwayo, Apple yakatanga imwe SIM, yakarongedzwa SIM makadhi kana Soft SIM yezvigadzirwa zvayo, kureva kuti, maSIM anogona kunyorwa nesoftware uye zvakarekodhwa pese paunoda pasina kuachinja .
Ehe, usakanganwa kuti kune akavhurika sosi mapurojekiti akakomberedza SIM makadhi. Seyakavhurika Hardware kuverenga SIM makadhi uye kushandisa muzvirongwa neArduino, nezvimwewo, pamwe neAllSIM, software yave ikozvino yakavhurwa sosi uye inobvumidza kushandisa chero SIM kadhi mune iPhone zvishandiso. Pamusoro pemamwe mapurojekiti anonakidza senge Vhura SIM Kit, kugadzirisa ruzivo rweSIM makadhi uye kugadzirisa mamwe emabasa avo.
IoT mapurojekiti: iyo Internet yezvinhu
Uye zvingave zvisina kunaka kupedzisa chinyorwa ichi pasina kutaura nezve iyo IoT kana iyo Internet yezvinhu zviri mufashoni sei. Sezvaunoziva, shanduko kubva ku IPv4 kuenda ku IPv6 yaunza huwandu hwusingaperi hweIPs ichibvisa kusakwana kwe IPv4, iyo yakaguma mufashoni umo vagadziri vachida kutora mukana wemugodhi mutsva uyu kubatanidza chinenge chero chishandiso kunetiweki, kubva kune yako TV, inopfeka, mudziyo, mota dzakabatana, matoyi, nezvimwe.
Uye mune ino nyika yeIoT kune akawanda emahara uye akavhurwa sosi mapurojekiti, ese software uye Hardware. Zvirongwa zvakaita seArduino uye mamwe maonesheni, pamwe nemabhodhi eSBC akadai seRaspberry Pi, akasvetukira paIoT bandwagon, pamwe nemamwe mapurojekiti senge mangOH yeakavhurika-sosi Hardware yeiyo IoT, protocols, software, mazano, nheyo , ... Naizvozvo rondedzero apa yaizove isingaperi, asi ndinoda kuratidza:
Vhura Interconnect Consortium
Ndinovimba wakazvifarira zvirinani kukutungamira munyika ino yatinoshandisa mazuva ese asi kuti isu hatizive zvakanyanya, zvirinani zvangu. Chero mupiro, zano kana kushoropodza zvichagamuchirwa. Siya zvaunotaura ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Nyika yepachena: SIM makadhi, nhare yeInternet uye mafoni epasi rese
Zvirokwazvo ramangwana riri pano, uye makambani ange ari iwo anotora chikamu chikuru maererano nechainjiniya drive yatinoreva.
Asi, sezvatiri mune ramangwana ... vashandisi vane tekinoroji kuwana kupfuura nakare, zvakanyanya. Izvi ndizvo zvakabvumidza kugadzira yemahara Hardware, chimwe chinhu chisingafungidzirwe makore mashoma apfuura.
Isu tichakurumidza kuona maprinta nema processor semagaraji mapurojekiti.
CentOS 6.8 yave kuwanikwa
Pasiwedhi chengetedza Grub menyu